KAOMINALY ANTANANARIVO SY ANTSIRABE : Lasan’ny volomboasary ny toerana nanjakan’ny Tim
Manangasanga ny fandresen’ny Kandidan’ny volomboasary mandritra izao hazakazaky ny fifidianana kaominaly izao. 28 novembre 2019
Mitarika amin’ny Faritra maro i Naina Andriantsitohaina eto Antananarivo renivohitra, raha ny voka-pifidianana vonjy maika azo tamin’ny biraom-pifidianana, hatramin’ny omaly hariva. Betsaka ny elanelam-bato misy eo aminy sy ny kandidan’ny Tim. Tafapetraka eo amin’ny laharana voalohany, araka izany ny Kandida Naina Andriantsitohaina ary laharana faharoa manaraka azy amin’ny elanelam-bato lavitra ny Kandida Rina Randriamasinoro. Anisany faritra nahazoan’ity Kandida ity vato betsaka ny eny Ankazomanga Avaratra sy ny manodidina ny 67ha, Ambohipo sy Ambolokandrina.
Tsy eto Antananarivo ihany fa any amin’ny Faritra ihany koa dia mitarika amin’ny biraom-pifidianana maro ny kandidan’ny volomboasary. Ny ao Antsirabe, ohatra, nosongonan’ny kandidan’ny Irk i Guy Rivo izay olon’ny Tim iringiriny. Ity faritra ity teo aloha dia nifidy an’ingahy Ravalomanana saingy nitsimbadika ny rasa ankehitriny satria tonga saina ny vahoaka. Mahatsapa izy ireo fa mila mitovy fomba fijery ny mpitondra sy ny mpitantana ny kaominina. Resy tao amin’ny taniny izany i Guy Rivo ary rava tanteraka ny fefin’ny Tim.
Taorian’ny fandatsaham-bato omaly hariva, nandray ny andraikitra tandrify azy manoloana ireo feo niely tamin’ny tambajotran-tserasera avy hatrany ny filoha lefitry ny Céni, Thierry Rakotonarivo. Nambarany fa mizotra am-pilaminana ny fifidianana nanerana ny Nosy tamin’ny ankapobeny. Nanome toro marika ho an’ireo mpikirakira voka-pifidianana koa izy mba hahafahan’izy ireo mandray fepetra raha misy ny olana. Nitondrany fanazavana manokana ny mahakasika ny Pasitera Lala Rasendrahasina izay nilaza fa tsy tafiditra tao anaty lisi-pifidianana.
“Efa naka fifindra-monina tao amin’io biraom-pifidianana io izy ary raha ny tokony ho izy talohan’ny fifidianana dia efa nanao fanamarinana ny anarany tao anaty birao fandatsaham-bato satria efa im-betsaka ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana no nanentana ny rehetra hanao izany”, hoy ny fanazavany. Araka ny fanazavany, aterina avy hatrany eny amin’ny rantsa-mangaikan’ny Céni eny anivon’ny distrika (SRMV) ny vato rehetra aorian’ny fanisana azy. Manana dimy andro indray ny Srmv hikirakirana izany ary aterina eny anivon’ny renivohitry ny Faritra ny vato rehetra isaky ny distrika avy eo.
Ny rantsa-mangaika isanisany eny anivon’ny Faritra indray no mikirakira ny vato sy manambatra azy aorian’izay. Manana 10 andro izy ireo hanaovana ny asany. Afaka mamoaka ny vokatra vonjy maika avy hatrany izy ireo aorian’izay. “Tsy ny Céni foibe intsony no mamoaka ny voka-pifidianana vonjy maika fa ny rantsa-mangaika isam-paritra, afaka mametraka fitoriana izay rehetra mahita tsy fahatomombanana aorian’ny vokatra avoaka”, hoy hatrany ny fanazavan’ny filoha lefitry ny Céni. Nambarany fa ankoatra ny Hcc izay fantatra fa tompon’ny teny farany hatramin’izay dia mihaino ny fitarainan’ireo manana fanamarihana koa ny filan-kevi-panjakana ary ity farany no manapaka.